रोचक • Anumodan National Daily
चन्द्रमामा पनि फल्ने आलु र फूल्नेछ फूल
यदि चीनले बनाएको योजना सफल भएमा अब छिटै चन्द्रमाको जमिनमा आलु फल्नेछ र फूल फुलेको देख्न पाइनेछ । चीनको एक विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले अहिले यो प्रयासमा जुटिरहेका छन् । समाचार अनुसार चीनले सन् २०१८ मा चन्द्रमामा आफ्नो पहिलो जैविक अन’सन्धानको रुपमा चांग इ फोर लुनार यानको माध्यमबाट चन्द्रमामा आलू, एक प्रकारको फूलको विजय तथा रेशम किराको … Read more
१३ सय रोबोट मिलेर बनाए विश्वको ठूलो कीर्तिमान
एउटा अनौठो खबर सार्वजनिक भएको छ । एउटा देशले रोबोटको फौज तयार गरिरहेको छ । हालै यस फौजका लागि १३ सय भन्दा धेरै रोबोट तयार गरिएको छ, जसबाट विश्व कीर्तिमान कायम भएको छ । घटना इटालीको हो । गिनिज रेकर्ड बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रोबोटले नाच प्रस्तुत गरेका छन् । मानव आकारका १३ सय … Read more
चन्द्रमामा ८० रोपनी जग्गा किन्ने यी हुन् पहिलो नेपाली
काठमाडौं । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक…’ कविताको अंशलाई सफलतासँग जोडेर उच्चाहरण गरिने गरिन्छ । काठमाडौं मखनका रमेशकुमार जोशीले महाववि देवकोटाको यहि कविताको अंशलाई सार्थक बनाएका छन् । अर्थात उद्देश्य लियो भने सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने उनको कामले सिद्ध गरेको छ । उनले सानैमा आफू पनि चन्द्रमामा पुग्न सकिन्छ कि … Read more
विश्व चर्चित व्यक्तिको प्रेम र विवाह
प्राणी जगत्मा प्रेम अपरिहार्य मानिन्छ । अझ मानव समाजमा प्रेमको महत्वको कुरा गरिसाध्य छैन । एउटा भनाइ छ–‘कसैको गहिरो प्रेमबाट शक्ति मिल्छ, कसैलाई गहिरो माया गर्दा साहस मिल्छ ।’ विश्वमा प्रेममा नपरेका मानिस भेट्न मुस्किलै छ । सानो वा ठूलो जुनसुकै मानिस प्रेममा परिरहेको हुन्छ । उमेर पुगेका व्यक्तिमध्ये कसैको प्रेम विवाहमा परिणत हुनसक्छ भने … Read more
यस्तो ठाउँ, जहाँ कहिल्यै बुढा हुँदैनन् महिलाहरु
दुनियाको एउटा यस्तो ठाउँका बारेमा के तपाइँले कहिल्यै सुन्नुभएको छ, जहाँ ७० वर्षका वृद्धा महिलाहरु पनि १७ वर्षे उमेरका झैँ तन्नेरी र सुन्दर देखिन्छन् ? सुन्दैमा अनौठो तथा लोभलाग्दो लाग्ने यस्तो यथार्थ पाकिस्तानको एउटा गाउँमा पाइन्छ । यो संसारमा सयौँ आदिवासीहरु बसोबास गर्दछन् । ती मध्इे एक हुन्जा आदिवासी यस्ता छन् जो वास्तवमा कहिल्यै बुढा … Read more
दुनियाँको यस्तो गाउँ, जहाँका सबै युवतीहरु कुमारी छन्
यो दुनियाँमा यस्तो गाउँ पनि छ, जहाँ केटीहरुलाई कुनै केटा पाउन मुस्किल छ र बिहे नगरीकनै जोवन बितिरहेको छ । जीवन साथी पाउने आशमा युवतीहरुले दिन गुजार्न र पाको उमेरसम्म पनि कुमारी नै बस्न बाध्य छन् त्यो गाउँका युवतीहरु । ब्राजिलको एक गाउँको अवस्था यस्तो छ । झण्डै ६ सय महिलाको जनसंख्या रहेको यो गाउँमा … Read more
खासमा कस्ता थिए हिटलर ?
जर्मनीको नाजी पार्टीका तत्कालीन नेता अडोल्फ हिटलरको चर्चा अहिले पनि विश्वभर हुन्छ । लाखौँ यहुदीको सम्हार गरेका हिटलरकै कारण दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । सो युद्धमा ६ करोड मानिसले ज्यान गुमाए । क्रुर तानाशाहको संज्ञा पाएका हिटलरको जीवनका केही भित्री पाटा रोचक र भावुक बनाउने खालका छन् : गरिबीले पढ्न पाएनन् एलोइस हिटलरकी तेस्री श्रीमती क्लाराको … Read more
यी १५ कुरा सोच्छन् यौन सम्पर्कका बेला महिलाहरु
काठमाडौं । मानव जिवनको लागि यौन महत्वपूर्ण पाटो हो । यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्ययन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक … Read more
यस्तो ठाउँ, जहाँ मृत्युसँग खेल्न अाँउछन् मान्छेहरु
यो बाटो यति खतरनाक छ की धेरैलाई त्यहाँ जानसक्ने कुराको कल्पना त परै जाओस् देख्दैमा डर लाग्दछ । यसलाई मृत्युको बाटो भनेर पनि चिनिन्छ । यहाँ एउटा सानो गल्तीले सिधै मृत्युको मुखमा पूराउँदछ । तर कोही मानिसहरु मृत्युसँग खेल्न रुचाउँछन् । त्यसैले उक्त बाटोमा पैठेजोरी खेल्न पुग्दछन् । नाक ठोक्किने ठाडो चट्टानी पहाडमा काठ तथा … Read more
विचित्र गाउँ, जहा मृतक सन्तानको बिहे गरिन्छ
ज्यूँदोको जन्ती, मर्दाको मलामी भन्ने उखानै छ । यसको अर्थ ज्यूँदो मान्छेको मात्र बिहे हुन्छ । तर भारतमा भने एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ मरेका बच्चाहरुको बिहे गराइन्छ । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सहारनपुर सहर नजिकै रहेको नटों गाउँमा यस्तो परम्परा रहेको छ । डोरीमा हिँड्ने कला देखाउने उक्त गाउँका आदिवासीहरुमा अनौठो प्राचीन संस्कार अद्यापि कायम … Read more